Ny foko eto Madagasikara dia vondron olona isan ny vahoaka malagasy izay heverina fa iray faritra niaviana, nanana fandaminana ara-pôlitika iraisany na nitoviany tamin ny vanimpotoana faha mpanjaka, manana ny fomba fitenenany ny teny malagasy izay atao hoe fitenim-paritra, sns. Tsy misy famaritana tokana eken ny maro ny hoe foko ka tsy fantatra noho izany ny tena isan ny foko eto Madagasikara. Mahazatra ny maro anefa ny miteny hoe "foko valo ambin ny folo" na dia tsy mifanandrify amin ny tena marina izany. Ao mantsy ireo izay milaza fa mihoatra ny roapolo ny foko eto Madagasikara. Ireo ata ...
Jean-Louis Robinson, teraka taminny 1952 tao Ampasikely, dia olom-pirenena malagasy. Taminny governemantani Ravalomanana izy dia minisitry ny fanatanjahan-tena, ny fahasalamana, ny fandrindram-piterahana, ny fiarovana ara-tsôsialy 2004-2008 ary minisitry ny kolontsaina. Kandidà ny antoko AVANA aminny fifidianana filoham-pirenena malagasinny taona 2013 ary lohalaharana taminny fihodinana voalohany.
Ny andriana dia sarangan olona farany ambony tao amin ny fanjakana maro teto Madagasikara izay nisongadina indrindra tao amin ny fanjakana merina, izay nipoiran ireo mpanjaka. Tao amin ny fanjakana merina, ny saranga lehibe telo hafa manampy azy io dia ny hova ny mainty sy ny mpanompo. Amin izao fotoana izao dia mbola misy ireo olona atao hoe andriana sy taranak andriana ao Antananarivo sy ny vohitra manodidina.
Ny Hova dia ireo olona ao amin ny saranga anelanelany tao amin ny Fanjakana merina izay sady tsy mpanompo no tsy andriana. Ilazan ny foko sasany eto Madagasikara ny foko merina tsy anavahana saranga koa ny hoe Hova. Ny Bara sy ny Betsileo ary ny Tanala dia manao hoe Hova ireo ataon ny Merina hoe "andriana".
Ny lambamena dia ilazana lamba hamonosana ny maty teo aminny Ntaolo. Anarana fotsiny ihany ny lambamena fa mety ho volonkazo ny lokony, mety ho fotsy na mavo na mena mihitsy, angamba noho izy mivadika mena rehefa ela namonosana razana no nahatonga ny anarany hoe lambamena. Ny lambalandy kosa dia ampiasaina hilazana ireo lamba vita aminny landy saingy hitafianny velona. Samy manana ny soratra sy lokony ireny lambamena ireny ary ny sasany aza dia misy ny anaranilay razana vita aminny vakana. Miankina aminny lokony sy ny halehibeny anefa no vidiny. Araka ny fiteny hoe "Izay sahy maty no mifon ...
Ireo mpanjaka rehetra nifandimby tao Analamasina dia samy nanana ny lapany avokoa izay trano kotona na trano hazo faranizay tsotra, tsy mifankaiza aminny tranonny mponina sarababem-bahoaka manodidina. Tsy misy tavela anefa ireo trano taminny andro fahagola rehetra talohanAndrianampoinimerina ireo. Fantatsika ary fa trano efa-joro avo tafo miloloha tandron-drano izy ireo. Ny hevitry ny tandron-drano, araka ny fampianarana azo raisina avy aminny filazanireo mponina any Indonesia, tanindrazana voalohany niavianny firenena Merina indrindra, dia fampahatsiahivina ny tandroky ny omby natao soron ...
Ny sorabe dia abidy iray avy aminny abjad arabo izay natao hanoratana ny fiteny ao Madagasikara, indrindra ireo fiteny ao atsimo atsinanani Madagasikara: ny fiteny antemoro-anteogny ary anakara. Fantatra fa isaina aman-jatony ireo lahatsoratra nosoratana taminny alalanio abidy io ; ny tena antitra aminireo lahatsoratra ireo dia nosoratana tany aminny taonjato faha-17 tany ho any. Taminny taonjato faha-18, fantatra ary nampiasainny foko rehetra eraki Madagasikara io abidy io: tao Imerina, nanafatra mpanoratra antemoro i Andrianampoinimerina mba hampianatra ny ankizy hamaky teny ary hanoratr ...
Ny Vazimba dia anarana niantsoana ireo mponina nonina taty anivoni Madagasikara talohanny nanjakan-dRabiby sy Andriamanelo. Rabiby sy Andriamanelo, mpanjaka jiosy maley mantsy no navahan ny lovantsofina fa Jiosy sy Maley ary ireo olomainty mpanompony no angaralahy, fa ireo sisa efa nonina taty anivontany tamin izany dia Vazimba. Ary Rabiby no nanenjika voalohany ny Vazimba sy nanosika azy handositra. Ny Vazimba dia razamben ny Malagasy tany aloha tany. Ny Vazimba dia manana ny hasina maha izy azy. Mbola tsy fatatra mazava anefa ny fiavian izy ireo na avy aiza na aiza. Ireo razana malagasy ...
Ny ziva dia isanny endrika isehoananny fihavanana malagasy nataonny razambe taloha. Ary saika mazana dia mpiziva avokoa no niavianny fihavananny Malagasy manontolo. Ny ompa ifanaovanny mpiziva dia sangy anehoany ny fifankatiavany ary ny foko mpiziva dia tsy maintsy mifanampy.